Kusolwa umona uthisha eshiselwa imoto - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa umona uthisha eshiselwa imoto
Kusolwa umona uthisha eshiselwa imoto
Ubeqala ukufika ngayo kubo, wavuka ebusuku isivutha amalangabi
ISALE injena imoto kaNkz Manto Duma oshiselwe imoto yakhe abegoduke ngayo okokuqala ngqa. ISITHOMBE: SITHUNYWELWE
SKHOSIPHI MTHEMBU noTHANDEKA NGOBESE
INJABULO iphenduke izinye-mbezi kowesifazane waseBri-ngton, eMpendle, ovuke ebusuku igqamuka amalangabi imoto yakhe entsha ceke, yohlobo lwePolo Comfortline yanonyaka, abeyihambise okokuqala ngqa kubo.
Lesi sigameko esenzeke ngeSo-nto ebusuku, sishiye lona wesifa-zane nobuhlungu benhliziyo nje-ngoba ibhange belisabambe imali okokuqala ngqa, kwabe sekwenzeka lesi sigameko.
UNkz Manto Duma (30), onguthi-sha kwesinye sezikole zaseGreyto-wn, ubezwakala ngisho ocingweni ukuthi usezwa iminjunju ngalesi sehlo. Uthi akazi ukuthi woneni kubani obengaze amgile ngale ndlela. Uthi kusenzima ukukhohlwa ngokumehlele. Uthi ubebuye ngoba ezoya emngcwabeni wesihlobo, okuthe sebebuya wayolala kubo kanti ebusuku bangeSonto uzovuswa ngumfowabo omncane imoto isisha ubuhanguhangu egcekeni.
“Ngivuswe ngumfowethu omncane ethi imoto yami iyasha, engikuqaphelile wukuthi bayifake utshani bokufulela indlu ngaphansi base bavuvuzela uphethiloli. Isigubhu sabo sikaphethiloli babaleke basishiya egcekeni, sathathwa ngamaphoyisa.
“Le moto bengiqala ukuya ngayo ekhaya njengoba ngiyithenge ngomhla ka-17 kuMbasa (April) ngenzela ukuthi kube lula ukuya ekhaya ngoba ngisebenzela kude. Kangikawakhi ngisho umuzi, ngiqale ngayo ngase ngithenga izitini nesihlabathi sokwakha,” kusho uNkz Duma.
Uthi ukholwa wukuthi yizimfamona zasendaweni ezenze lokhu ngoba akakaze axabane namuntu ngisho abantu abejola nabo ubehlukana kahle kahle nabo, akekho owake waxabana naye.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe icala lokucekela phansi impahla emuva kokuba owesifazane epake imoto yakhe, wavuka seyisha. Ukuqinisekisile ukuthi amaphoyisa athole isigubhu eduza kwemoto, wathi uphenyo lusaqhubeka.
Previous articleKufezeke iphupho loSuthu ngeCaf
Next article‘Ufele ukufuna ukudla okunenyama’